Hogaamiyaha Al-Shabab Abuu Zubeyr oo fariin u diray Soomaalida Ethiopia
Hogaamiyaha Al-Shabab Abuu Zubeyr oo fariin u diray Soomaalida Ethiopia Mogadishu Arbaco 12 December 2012 SMC
Hogaamiyaha Al-Shabab Abuu Zubeyr oo fariin u diray Soomaalida Ethiopia (Codkii godane) Hogamiyaha guud ee Xarakadda Al-Shabab Axmed Cabdi Aw-Godane Al-Shabab dhexdeedana looga yaqaan Sh, Mukhtar C/raxmaan Abuu-Zubeyr oo soo saaray cajalad cod ah ayaa waxaa uu fariin ugu diray dadka Soomaaaliyeed ee ku nool kilinka 5aaad ee Ethiopia maamusho.
Abuu Zubeyr oo ku hadlayay luuqada Carabiga ayaa waxaa uu sheegay in la joogo waqtigii ay Soomaalida Ethiopia ka bixi lahaayeen gumeysiga ay ku jiraan isla markaan ay ka hoos bixi lahaayeen m/mulka Ethiopia.
Geeridii R/wasaarihii hore ee Ethiopia Meles Zenawe ayuu sheegay inay fursad u tahay Soomaalida Kilinka, 5aaad.
"Geeridii Meles waxay aheyd guul weyn oo taariikhi ah una soo hoyaday ummaa Mulimiinta gar ahaan Soomaalida meel walba oo ay degen yihiin marka waa inaad ka faa’ideysatsaan" ayuu hadalkiisa ku yiri hogaamiyaha guud ee Xarakadda Al-Shabab.
Inay la dagaalamaan dawlada Ethiopia oo uu ku sheegay inuu yahay mid Saliibi ah ayuu ku baaqay hogaamiyaha Al-Shabab.
"Dawlada Ethiopia ee gaalada ah waa tan idin kala qey qeybinaysa waa inaad dadaashaan oo aad diidaan gumeysiga" ayuu yiri Axmed Godane hogaamiyaha guud ee Al-Shabab.
Arrimo la xariira dagaalada ay Shabab ka wadaan gudaha Soomaaliya ayuu ka hadlay Abuu Zubeyr oo uu tilmaamay inay uga gol leeyihiin xoreynta dadka Soomaaliyeed ee gumeysiga ku jira.